Naqshadayaasha Midabaynta Midabbada
waxaad ka heli kartaa midab kala duwan. Waxaad ka raadin kartaa dhammaan waxyaabaha ku saabsan midabaynta websaydhkan. Bog internet ah oo bixiya midabo badan qaab sawirada, midabyadu waxay noqdaan wax aad muhiim ugu ah nolosheena. Midabku wuxuu leeyahay rafcaan u gaar ah aadanaha. Waxaa intaa dheer, websaydhkan ayaa sidoo kale soo bandhigaya naqshad kala duwan oo guriga ah iyo rinjiyeynta taas oo ah mushahar aan ka yaraynayn midabka. Kaliya kuma eka rinjiyeynta, qalabka guryaha ama rinjiga gidaarka waxay leeyihiin kala duwanaansho midab oo xiiso leh.
Kaliya baar ku samee websaydhkan, waxaad ka heli kartaa sawirro rinjiyeyn Gudaha ah iyo naqshad Dibadeed oo kala duwan. Dhiirrigelinta rinjiga derbiga ee kala duwan ayaa gurigaaga ka dhigi kara mid qurux badan oo raaxo leh oo ku mashquulsan. Fikradaha naqshadeynta ee lagu dhammeeyo qurxinta cajiibka ah waxay noqon karaan dhiirigelin aad uhesho guriga qurxinta. Ma aha oo kaliya guud ahaan qaybta guriga, laakiin sidoo kale naqshadee qol kasta iyo qurxinta. Tusaale ahaan, naqshadda musqusha oo ay ku qalabeysan yihiin musqulaha, musqusha, qubayska, waaskada, armaajooyinka, iyo sidoo kale laambadaha hurdada iyo qurxinta darbiyada iyo naqshada saqafka. Noocyo kala duwan oo guryo ah ayaa sidoo kale ku jira websaydhkan, nooca nooca, mid fudud, mid yar, xarrago ama nooca raaxada. Iyada oo xulashooyin badan oo naqshad ah ay la socdaan qaabeynta faahfaahsan, way ka sahlan tahay waxayna qayb ka noqon kartaa tixgelintaada go’aaminta naqshadda iyo midabka ku habboon gurigaaga.